အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အကြောင်း	4
Posted by ko six on Jun 15, 2016 in Poetry |4comments
Thint Aye Yeik says: ကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာဗျို့… သမိုင်းက
(ကိုစစ်- အကြောင်း အမည်ရှိ ကဗျာမှ…)
ဖာရာထေးရာတွေ တင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်သွားရုံနဲ့တော့….
အကျီ င်္က သစ်မသွားဘူး….. (တာရာမင်းဝေ – ယန္တရားအရေခွံနဲ့လူ စာအုပ်မှ)
ဒီလောက် အပေါက်အပြဲတွေ ဖောက် ဖြဲပစ်ခဲ့တာတောင်မှ….
ဖာထေး ပြု ပြင်ပေးခဲ့လို့…သစ်လွင်တောက်ပခဲ့ပါတယ်ရယ်လို့…ပြောရဲခဲ့သေးတယ်…
( မောင်သူရ – အခုပိုစ့်ထဲတွင် ပြောသည်။ )
ko six says: ဘော်ဒါပက်တွေဆိုတော့
တစ်မိနစ် 1500 နှုန်းနဲ့ပါလား
အောင် မိုးသူ says: ညောင်မြစ်တူးရင် ပုတ်ပေါ်မယ်လေ
ko six says: ခုဟာက